Mayelana no-Yurie BSF - Ukulima kokuqala kwama-Maggot okungajwayelekile
Mayelana no-Yurie BSF
Mayelana Nathi - Mayelana no-Yurie BSF yile nkampani kuphela waphayona umlimi wesimanje we-BSF umlingo wesimanga. Uhlelo lwe-10 luhle kakhulu u-Yurie BSF njengemoto ephumelelayo yokulima kwe-BSF yanamuhla ngaphandle kokuhogela. Sihlakulela ukulima umlingo ongenasiphelo wesosha omnyama ukuhamba izinambuzane.
Inqubo yokuhlakulela umlenze ngaphandle kokusebenzisa iphunga
Idoti yomakethe, RT
Umquba wezilwane kanye
Ngaphandle kokuvuthwa, ngaphandle kwezidakamizwa futhi ngaphandle kwemishini. Ngabezindaba noma substrate ngaphandle kokutholakala kalula ngoba eziningi zitholakala yonke indawo futhi zivame ukunganakiwe.
Ngisho nezindaba ezintathu eziyinhloko ziba nezinkinga emvelweni ezingcolile, ezingcolile nezingcolile. Ukuphumelela esikwenzayo nabezindaba ezintathu ngenhloso yokulondoloza ukuze abalimi bakwazi ukujabulela izinzuzo eziningi ngoba izithako zikhululekile.
Kubuye kubonakale ukukhathazeka kukaYurie BSF ngezinkinga zemfucuza, imfucuza kanye namanzi okudoba e-Indonesia. Ithemba lethu liwukuthi le ndlela yokulima umlingo ongenasici ingaba yisisombululo esisodwa sonke sokwenza i-Indonesia ehlanzekile.
Umbono wethu kanye nenjongo yethu kubonakala ngokucacile ngesiqubulo sethu, Ukubingelela kanye NOKUKHULUZA INDONESIAN WAMI. Ngokulimala okungenasici, kulindeleke ukuthi izinhlanzi, izinkukhu kanye nabalimi bezilwane ezifuywayo zizothola ngokwanele ekuhlinzekeni ukudla, ukudla okunomsoco ezinomsoco kanye neprotheni ephezulu kanye nezindleko ezizungeze ukudla kwezilwane ezingu-Rp2.500-Rp3.100.
Ngezindleko ezinjalo eziphansi, kulindeleke ukuthi abalimi babe nethemba elibanzi lokuthuthukisa nokukhulisa imfuyo yabo. Ngoba kuze kube manje sekukhona amacala amaningi abalimi abaye bawayeka ngoba behluleka ukukhokhela izilwane zabo zokudla.
Ukudla kwezilwane kuyindleko yokukhiqiza engafinyelela ku-70%. Lokhu kusalokhu kubalwa ephepheni. Labo abaqala nje le mali bangakhuphukela ku-80%.
Lokhu kuyingozi kakhulu ngoba:
ukuguquguquka kwentengo yokuthengisa kanye
ezinye izinto kufanele nazo zicatshangelwe.
Ukulima umgogodla ifa labantu base-Indonesian abasinikezwe. Bheka nje kusukela ezikhathini zasendulo baye baxwayisa ukuthi ukuze imfuyo iphumelele idinga ukudla kwemvelo kanye namafomu engeziwe.
Lo mlayezo ubhalwe ngokucacile encwadini ngayinye ephrintiwe esahlukweni sokuphatha okuthengiswayo esithengiswa ezitolo zamabhuku. Ukuhlakulela izincwadi ezikhona esasikwenza kusukela endleleni yokutshalwa kwemagot ibe yindlela yokulima ye-BSF yanamuhla, engenamakha.
Indlela Yokulima Umgogodla
Izindlela zokulima ze-BSF zesimanje ngaphandle kokuhogela, ngaphandle kwemiphumela zigcwele futhi i-magot-maggot ekhiqizwa inempilo ngoba igcinwe kahle. Futhi qinisekisa ukuphepha kwebhizinisi lesikhathi eside, okungenakho iphunga, imiphumela eningi nokusimeme.
Iphunga elibangelwa inqubo yokulima umlingo kuyisongo esiyingozi ekuqhubekeni kwebhizinisi lokunikeza ukudla okuncishisiwe. Ukuhlakulela umgogodla ongenasici, ngaphandle kokukwenza kungabakhuthazi kubalimi, futhi kumema izinambuzane ezifana namagundane, amaphele, izinyoka kanye nempilo kubalimi ngokwabo.
Ukungasho ukuthi ukungcola okwenziwe umuncu kuzobangela ukuthi kube nemibhikisho emndenini, futhi impela umphakathi ngeke uhlale ungathuli uma ukungcoliswa okwemnandi kunsabalala kuyo yonke indawo. Kunezibonelo eziningi zamacala ezindaweni ezithile zebhizinisi le-maggot emva kokuhamba kwonyaka njalo embukisweni womphakathi futhi kufanele uvale.
Lesi simo silimaza kakhulu, umsebenzi onzima oye walwa ngawo. Ngakho-ke, kusukela ekuqaleni, qiniseka ukuthi uhlela ibhizinisi ngaphandle kokuhogela. Uma kungenjalo empeleni uhlela ukuchithwa kwebhizinisi.
Ngomzamo wokufeza amaphupho ethu SONDISA futhi SIKHULUME INDONESIAN WAMI. Kukhona uhlelo lwe-10 lomsebenzi oluye lwasetshenziswa nge-SOP (inqubo ejwayelekile yokusebenza) ukuze kusetshenziswe ukusebenza komsebenzi wamalanga onke.
Okwamanje sisakaze emadolobheni angaphezulu kwe-99 kulo lonke elase-Indonesia. Uvele ukhethe indawo esiseduze kakhulu lapho uhlala khona.
Mayelana ne-10 Izinzuzo ze-Yurie BSF
I-1. Ukukhiqizwa okuningi kweMaggot ngaphandle kokuhogela.
Uzoqondiswa kusuka ku-zero ukukhiqiza ngokuphumelelayo umlenze ngaphandle kokuhogela, kusukela ekufundeni ukuqhuba ngokuqondile emanzini ongakhetha kuwo emzini we-99 e-Indonesia.
Usuku lonke uzozijwayeza ngokushesha uhambisane nomcebisi wangasese (hhayi uhlelo lwesigaba) futhi uqhubeke neziqondiso ezisebenzayo ekhaya uze uphumelele. Khona-ke Izinzuzo zokufunda Ukuzimela KwamaMaggot Okungaziwa Ngamabonakude:
Uzonikezwa ukunakekelwa okukhethekile ngabeluleki abanolwazi ukuze ukwazi ukuqinisekisa ukuthi umqondisi ugxile futhi ugcwele ngokugcwele kulokho okuhloswe ngakho nokulindela.
Le ndlela yangasese ivumela abeluleki ukuba banikeze izixazululo ezisheshayo kunokuba isistimu yeklasi yokuphumayo.
Ngomhlahlandlela wencwadi yokufundisa ohlinzekwayo futhi ungafunda ngohlelo lwe-Yurie BSF ku-playstore. Ikuvumela ukuba ufunde kabanzi ukhululekile futhi uqiniseka ngaphambi kokusebenza epulazini
I-Practice Best Mentor
Uzozijwayela ukuqondiswa ngabaqondisi abakhulu abaphumelele ekulimeni i-BSF yanamuhla ngaphandle kokuhogela. Ubani abanomdlandla mayelana nokwabelana okuhlangenwe nakho. Lokhu kuzuzisa kakhulu kuwe, ngoba bangabonisa ukuthi umkhuba wokuhlakulela umgogodla ngaphandle kokuzwa iphutha imininingwane.
Le ndlela izokwenza ngcono kakhulu amakhono akho wokuxazulula izinkinga emisebenzini yakho yansuku zonke ekhaya ngemva kokuqeda umkhuba.
Imvelo Yokufunda Ephelele
Ukhona futhi ufunde endaweni ephelele lapho ezindaweni ezinabantu abaningi kakhulu.
Lokhu kutshalwa ngamagogasi kungenziwa ngaphandle kokusongelwa kweDemos emndenini nasemphakathini ngoba yenzelwe ngaphandle kokuhogela.
Ngisho nezinye zazo zikhiqiza imifino yamaggot ngaphakathi endlini ngokusebenzisa igumbi lomntwana.
Lapha ufundiswa ngempela ukuba ukwazi ukuhlakulela ezindaweni eziningi ezihlukahlukene zomhlaba nezindawo ezinabantu abaningi ngaphandle kokwesaba imiboniso.
Ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho, esinye sezici zokuhluleka kuyihlazo lokubuza futhi nokho nalesi simiso esiyimfihlo, izinto zingalungiswa. Ngoba nguwe kuphela nomeluleki kokubili ukuze ukwandise ukuzethemba kwakho ekufundeni ngaphandle kokwesaba noma ukuhlazeka ukubuza
I-Mentor yangasese yangakwesokudla
Ungakhetha umeluleki omuhle edolobheni le-99, ukhethe umeluleki we-99 oyifunayo futhi ohambisana nezidingo zakho.
Umcebisi oqeqeshwe anganikeza ulwazi mayelana nezinselele ezikhona emadolobheni abo. lokhu kungenzeka ngoba wena nomeluleki basendaweni eseduze ngakho-ke izinkinga zenkambu yangempela zikhonjisiwe.
Unquma usuku nosuku, ngakho ngeke luphazamise imisebenzi yomsebenzi noma abanye.
Unenkululeko yokuxoxa ngoba umqeqeshi wakho uzoqonda kangcono futhi anikeze ukusekelwa okudingekayo
I-2. Umxube Wokuxuba I-Formula Gcina kuze kufike ku-83%
Ngemuva kokuba unomuthi, uzoqhutshwa ibhomu, ungaxuba umgogodla we-BSF enefomula ekhethekile futhi ulondoloze ku-83%
I-3. Ukukhangiswa kweMaggot ye-BSG
Awudingi ukudideka mayelana nokumaketha kwemaggot. Thengisa BSF YURIE !!! Siyakwamukela ukuthengisa umagog bese uthenge umlenze wakho Rp7.000 / kg
I-4. Ukuthuthukiswa Kwebhizinisi
Uma ukhuthazela ukuthengisa umgogodla ku-Yurie BSF. Ngaphezu kwalokho, silungise uhlelo losizo lokuthuthukisa ibhizinisi le-maggot. Usizo lokuqala lwe-Rp100.000.000 lisetshenziselwa ukwandisa ukukhiqizwa kokukhiqizwa.
Usizo lomngani lubuyiselwe futhi lu-PAID usebenzisa i-MAGGOT. With value efanayo WITHOUT FLOWER - NGAPHANDLE RIBA !!!
I-5. I-Ambassador Yurie BSF
Ekusebenzeni kwansuku zonke, ngezinye izikhathi kungenakuhlukaniswa nenkinga okufanele ixazululwe. Kanye nommeli we-Yurie BSF, usukulungele ukuba khona epulazini lakho ukuxazulula izinkinga ezibhekene nazo.
Isiqondiso esithuthukisiwe kuhlaka lokulawulwa kwekhwalithi eqhubekayo. Ngenxa yalesi sizathu ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi elikhiqizwayo liyimfanelo ephakeme. Ngokunikeza ukuqeqeshwa okuthuthukile ezingeni eliphezulu.
I-7. I-Indonesian Cooperative Maggot
Ukuze sibe yingxenye yemakethe kazwelonke silungiselela ama-co-operative aseMindonesian. Lokho kuyoba yindawo yokuthenga nokuthengisa umlingo wezihlobo ze-Yurie BSF.
Isinyathelo esilandelayo ukuba yingxenye yentuthuko yebhizinisi lemboni yezwe kanye nokukwazi ukuhlangabezana nezidingo zezimakethe zasekhaya nasemhlabeni wonke.
Uhlelo lwezenhlalakahle lwezenhlalakahle (CSR) ngqo kulabo abakwazi ukukwazi ukuthenga iphakheji le-BSF yanamuhla ngaphandle kokuhogela.
I-10. Ukuthandaza nokuzama
Kumele sithandaze ukuthi zonke izinyathelo esithathayo zivikelwe njalo ngu Allah SWT.
Ezingxenyeni ezahlukene u-Yurie BSF uhlakulela ukudla okukhethekile ohlelweni lokuthuthukiswa kwe-BSF magot. Ngenxa yalokho lokhu kuhlukaniswa kugxile ekwakhiweni kwezimpawu eziphezulu zekhwalithi ngokusebenzisa imfucuza yezinto eziphilayo ngokubambisana nemikhiqizo yokudla nezinkampani eziyaziwayo e-Indonesia nasemhlabeni. U-Yurie BSF uvula amathuba okubambisana namaqembu amaningi ukuze aqhubeke nokuthuthukisa ukukhiqizwa nokumaketha kwamaggot.
Uma unesithakazelo sicela uxhumane nathi.
Izindlela ezilula futhi eziwusizo zokwenza i-EM4 eyedwa ekhaya